सामाजिक सञ्जालमा सारी र दाह्री किन बन्यो भाइरल ? « Khabarhub
सामाजिक सञ्जालमा सारी र दाह्री किन बन्यो भाइरल ?
काठमाडौं–केहिदिन यता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुबीच सारी र दाह्रीको प्रसंग चर्चामा रहेको छ ।
नेपाली समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुमाझ मुख्यरुपमा दुई खालका तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । पहिलो सारी र दोस्रो दारी !
धेरै जसो महिला सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताहरुले सारी लगाएको तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन् भने पुरुष प्रयोग कर्ताहरुले आफ्नो स्वरुपलाई बुढो बनाउँदै फुलेका दाह्री र कपाल भएका तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेका छन् । अधबैँसे उमेरका प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो बुढ्यौलीको रूप सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश पुरुषहरू छन् ।
बुढ्यौलीको रुप बनाउन उनीहरुले एउटा एपको प्रयोग गरिरहेका छन् । फेसएप नाम गरेको एप केही दिन देखि नेपालमा मात्र नभएर अन्य देशमा समेत प्रयोग भइरहेको छ । जसको मद्दतमा अनुहार चाउरी परेको देखाउन, दारी र कपाल सेतो बनाउन सकिन्छ ।
उता सारीको प्रयोग गर्ने युवतीहरुले आफ्ना नयाँ र पुराना तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् । यस्तो ट्रेन्ड नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि चलेको छ ।
When Neelam wears Neelo saree ??#SareeTwitter pic.twitter.com/dPvO1z3dC8
— Neelam Chand (@neelamchand12) July 17, 2019
साउन महिना लागेसँगै महिलाहरुले हरियो र पहेलो चुराका साथमा सारी लगाउने भएका कारण साउन लाग्नासाथ सामाजिक सञ्जालमा सारी लगाएको फोटो पोस्ट गर्ने युवतीको संख्यामा बृद्धि भएको हो ।
फेस एपको प्रयोग गर्नेमा कलाकार देखि सर्वसाधारण समेत रहेका छन् ।
कलाकारहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसबूक तथा इन्स्टाग्राममा एपका माध्यमबाट आफूलाई बूढो देखाइएका तस्वीरहरु शेयर गरिरहेका छन् । कतिपय कलाकारका भने पब्लिक तस्वीरलाई नै फ्यानहरुले एपका माध्यमबाट बूढो बनाएर पोस्ट गरिरहेका छन् ।
एन्ड्रोइड र आइफोन दुवै एपमा उपलब्ध यो एपले कुनै पनि तस्वीरलाई बूढो देखाउने गर्छ । सन २०१७ मै उपलब्ध यो एप एक रसियन कम्पनीले निर्माण गरेको हो ।
केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा यो एपको प्रयोग बढ्दो छ । विज्ञहरुले भने यो एपले मोबाइलको ग्यालरीका तस्वीरहरु चोर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अभिनेता दीपकराज गिरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एपका माध्यमबाट बूढो देखिएको तस्वीर शेयर गर्दै लेखेका छन्, ‘बिहान बिहान कुन चाहिँले काम पाएनछ, यस्तो बनाएर मलाई नै पठाएछ, बनाउन त बनायो ठीकै छ, तर मेरो हजुरबा भन्दा नि बूढो बनाएछ ।’
एकाबिहानै दीपकराज गिरीले तस्वीर शेयर गरेपछि अरु कलाकारले पनि तस्वीर अपलोड गर्न थाले । सामाजिक सञ्जालमा केदार प्रसाद घिमिरेले पनि तस्वीरहरु शेयर गरेका छन् । ती तस्वीरलाई उनले रमाइलोका रुपमा लिएका छन् ।
मोडल नीति शाहले पनि इन्स्टाग्राममा आफ्नो बुढ्यौली तस्वीर शेयर गरेकी छिन् । उनले मात्र होइन, अन्य नायिकाहरुले पनि एपका माध्यमबाट तस्वीर मोडिफाई गरेर अपलोड गरेका छन् । यसलाई धेरैले रमाइलोका रुपमा लिएका छन् ।
जितु नेपालले तस्वीर शेयर गर्दै लेखेका छन्, ‘नेपाली बाजेले जीतु बाजेको फोटो बनाएछ, ८०बर्षको जीतु नेपाल अरे नि त ।’
निति शाहले इन्स्टाग्राममा यी तस्वीर शेयर गरेकी छिन् ।
प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७६, बिहीबार ४ : १९ बजे